Light Poles ထုတ်လုပ်သူများ - China Light Poles Factory, Suppliers
6 မီတာ အပြင်ဘက် လမ်းမီးတိုင် ထုတ်လုပ်သူ တိုက်ရိုက်ရောင်းသည့် မီးအိမ်ပို့စ်
● ဧရိယာကျယ်သောအလင်းရောင်၊ အလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ကောင်းမွန်သည်၊ အလင်းရင်းမြစ်ကို ဗဟိုပြုသည်၊ တူညီသောအလင်းရောင်၊ အလင်းပြန်မှုသည် သေးငယ်သည်။
● မီးတိုင်သည် အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိပြားကို ပုံသွင်းကာ ပိရမစ်ပုံသဏ္ဍာန်တွင် အမျိုးအစားသံမဏိ၊ ပူကျုံ့သွပ်ရည်ဖြင့် တိုက်စားမှု ဆန့်ကျင်သည့် ဆက်ဆံမှုပြုခြင်းဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် စတီးပြားဖြစ်သည်။
● အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော မီးချောင်းအရိုးစု။
● သံမဏိစတီးလ်အတွက် အခွံမာသီးများ။
● အသုံးပြုနိုင်သောနေရာများ- City Square၊ ဘူတာရုံ၊ ဆိပ်ခံတံတား၊ အဝေးပြေးတံတား၊ အားကစားကွင်း၊ စသည်
အရည်အသွေးမြင့်4မီတာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီးတိုင် / အလင်းရောင်ပို့စ်ပြင်ပ
● အလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ကောင်းမွန်သည်၊ အလင်းရင်းမြစ်ကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသည်၊ တူညီသောအလင်းရောင်၊ အလင်းပြန်မှုသည် သေးငယ်သည်။
● မီးတိုင်သည် ပူပြင်းသော သွပ်ရည်စိမ်ရည်ဖြင့် သံချေးတက်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည်။
3 မီတာ တာရှည်ခံ ဆိုလာ လမ်းမီးများ မီးအိမ် ပြင်ပ ရေစိုခံခြင်း။
100W 200W 300W အရည်အသွေးကောင်း ပြင်ပဆိုလာလမ်းမီးသည် အလွန်တောက်ပပြီး ဈေးမကြီးပါ။
အမျိုးအစားအလိုက် အရောင်အပူချိန်(CCT) 5000K (နေ့အလင်းရောင်) အဝင်ဗို့အား(V): DC 6V မီးချောင်း တောက်ပမှုစွမ်းဆောင်ရည်(lm/w): 80 အာမခံ(နှစ်): 2-နှစ် အရောင်ဖော်ပြမှုအညွှန်း(Ra): 80 ပံ့ပိုးမှုမှိန်စက်- အလင်းရောင်မရှိပါ ဖြေရှင်းချက်များ ဝန်ဆောင်မှု- အလင်းရောင်နှင့် ဆားကစ်ဒီဇိုင်း သက်တမ်း (နာရီ)- 50000 အလုပ်ချိန် (နာရီ): 50000 အမျိုးအစား- ဆိုလာလမ်းပြမီး မော်ဒယ်နံပါတ်: HXT-LD-44300BP IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်: IP66 ပါဝါအရင်းအမြစ်: ဆိုလာမီးအိမ် အလင်းဝင်ပေါက်(lm): 4960 အလင်းဆု...
60W Solar Led လမ်းမီးများ
1. BK စီးရီး 20W မှ 60W ။
2. ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်း၊ ဆိုလာပြား၊ မီးချောင်း၊ ဘက်ထရီနှင့် စမတ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာအားလုံးကို ကေဘယ်ကြိုးမပါဘဲ သေတ္တာတစ်ခုထဲတွင် ထည့်ပါ။
3. PIR လှုပ်ရှားမှုအာရုံခံကိရိယာဖြင့် စွမ်းအင်ချွေတာသည့်မုဒ်ရှိခြင်း။
4. ၎င်းတို့ကို လက်ခံရရှိသောအခါ သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ ၎င်းတို့ကို ဝါးလုံး သို့မဟုတ် နံရံပေါ်တွင် တင်ထားရန်ဖြစ်ပြီး သင်္ဘောတင်ရန်၊ တပ်ဆင်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် လွယ်ကူသည်။
အရည်အသွေးမြင့် မားစ်မီးတိုင်များ အရောင်းအ၀ယ်ပူပူ
ပစ္စည်းနှင့်အင်္ဂါရပ်များ- ——————- ● ဧရိယာကြီးမားသောအလင်းရောင်၊ အလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ကောင်းမွန်သည်၊ အလင်းရောင်အရင်းအမြစ်ကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသည်၊ တူညီသောအလင်းရောင်၊ အလင်းပြန်မှုသည် သေးငယ်သည်။ ● မီးတိုင်သည် အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိပြားကို ပုံသွင်းကာ ပိရမစ်ပုံသဏ္ဍာန်တွင် အမျိုးအစားသံမဏိ၊ ပူကျုံ့သွပ်ရည်ဖြင့် တိုက်စားမှု ဆန့်ကျင်သည့် ဆက်ဆံမှုပြုခြင်းဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် စတီးပြားဖြစ်သည်။ ● အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော မီးချောင်းအရိုးစု။ ● သံမဏိစတီးလ်အတွက် အခွံမာသီးများ။ ● အရင်းအမြစ်-LED။ ● အသုံးပြုနိုင်သောနေရာများ- မြို့တော်ရင်ပြင်၊ ဘူတာရုံ၊ မြစ်ဆိပ်၊ အဝေးပြေးလမ်း၊...
ပြင်ပ5မီတာ6မီတာ7မီတာ 8 မီတာ9မီတာ 10 မီတာ ဆိုလာလမ်းမီးတိုင် ကာစ်
• ကားရပ်ရန်နေရာ စသည်တို့။
လဟာပြင်လမ်း Street Light Pole 3m 4m 6m လမ်းမီးတိုင်
ပြင်ပအလင်းရောင် 20 မီတာ 25 မီတာ 30 မီတာ Hot Sales Round Lamp Steel High Mast Pole
96 LED 50W နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး ပြင်ပအလင်းရောင် မြင့်မားသော lumen အလူမီနီယမ် လမ်းမီးအလင်းရောင်
ဆိုလာလမ်းမီးများကို ပုံဆောင်ခဲအဖြစ် ဆီလီကွန် ဆိုလာဆဲလ်များဖြင့် စွမ်းအင်ပေးပါသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အခမဲ့ဆို့ရှင်ထိန်းချုပ်ထားသော အလုံပိတ်ဘက်ထရီများ (ကော်လိုဒိုင်းဘက်ထရီ) သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်သည်။ အလွန်တောက်ပသော LED မီးချောင်းများကို အလင်းရင်းမြစ်များအဖြစ် အသုံးပြုပြီး အများသူငှာ လျှပ်စစ်မီးအလင်းရောင်အတွက် သမားရိုးကျ လမ်းမီးများကို အစားထိုးရန်အတွက် အသိဉာဏ်အားသွင်းခြင်းနှင့် စွန့်ထုတ်သည့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ကေဘယ်တင်ခြင်း မရှိခြင်း၊ AC ပါဝါထောက်ပံ့ခြင်း နှင့် လျှပ်စစ်အားသွင်းခြင်း မရှိပါ။ DC ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု; အသုံးဝင်ပုံမော်ဒယ်သည် ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှု၊ တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း၊ မြင့်မားသောတောက်ပသည့်ထိရောက်မှု၊ ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှု၊ မြင့်မားသောဘေးကင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လက်တွေ့ကျမှုတို့ဖြစ်သည်။